GPS cabbirka keykutarka iyo telefoonada dhammaan dhulalka - Geofumed
Nofeembar, 2011 GPS / Qalabka, tabo cusub
Waxaa jira qalab aadan heli dukaanka phone a sida telefoonka ah in ay taageertaa 30 daqiiqo quusto quuska, kiiska in recubres iPhone ah maalin ee barafka jet ama GPS Ghadafi in la xasuusto wadada badda.
Cabbirada dhulka waa dukaanka aad ka heli kartid iyo takhasusleeyaal badan oo ku jira telefoonka rugta leh iyo horjoogayaasha qaybtaas, oo leh liis garaaf leh oo badeecooyin ah; si aad u muujisid dhowr tusaale oo laga heli karo boggaaga:
GPS ugu yaraan
Waxaan noqon lahaa aad u faa'iido badan intii aan ku qaatay ku dhawaad ​​saacad raadinaya gaariga in la dhigto halkaas oo ay in ka badan baabuurta 4,000, waxay illoobeen inay qorto qaybta code ah; Anigu waan qaylin lahaa, oo nacasnimadayda ayaan u maleynayaa in la xaday. Wixii arrimahaan ah, ama kiiska xasuusinta waddo adigoon u galin bareeg caadi ah, qalabkani wuxuu u shaqeeyaa si yaab leh. Aad bay u yartahay in ay u dhaqanto sida furaha, waxay ku kaydin kartaa dhibco ku filan si ay u xasuusto waddada soo noqota oo kaliya adoo raacaya fallaadhaha.
Xaaladda Akoonada Smartphone ee AquaBox Waterproof
Taasna waxaad ku dari kartaa mobile, adiga oo aan kaa hor istaageyn inaad isticmaasho taabashada. Ku haboon in loo isticmaalo xeebta, dabaalasho, isboortiga biyo ama birtiina waa kalluumaysiga, sababtoo ah si ay Tumeeya mahad qalab iyo aad u bogaan kartaa ilaa 6 mitir oo aan halista.
Waxay ku haboon tahay dhamaan noocyadan:
Apple: iPhone (dhammaan), duubista
Blackberry: Leh 9700, 9000, Pearl, Duufaan 2, Kaji Kareemka
HTC: Hero, Touch Pro2, Aria, 2 jilicsan, jilicsanaan la'aanta, My Touch, Ozone
LG: Taabashad taabasho, Tanthom, Ally, OptimusS, M, Centio
Motorola: Backflip (xiran), Droid R2D2, Droid 2, Devour, CliqXT, defy
Samsung: Raadi, Dareen Dheeraad ah HD, Intercept, Transofrm, Captivate, Moment, Caliber, Farshaxanka, Culeyska
Telefoonada oo dhan
Sida caadiga ah loogu talagalay bay'ad biyo, ama qoyan, si caadi ahaan taageeraan ilaa nus saac ah biyaha hoostooda, heerkulka aad u daran, birtiina waa biyo iyo waxaa lagu dahaarka leh kula sanduuqa battariga caag in ay hor istaagi dhibcood ka badan 1.50 mitir ah. Intaa waxaa dheer, waxay keeni qolka muddo ka badan hal SIM kaar oo ka soo furan si loogu isticmaalo bixiyaha taleefoonka kasta; inta badan ay adkaysan saacadood dheer oo hadal joogto ah oo aan laga badinin signalka. Qaar ka mid ah waxaa ka mid ah tilmaamaha a laser, toosh, raadiyaha FM, matoor inay ka qaadaan batteriga koronto la'aan iyo qaar ka mid ah, sida ay dhacdo Bravus LM802B kor u taageertaa inay 19 maalmood in hab heegan.
Waxaa jira noocyo sida Bravus, Samsung, Sonim, ITTM, Topcom, ATEX, iyo kuwo kale, oo leh noocyo kala duwan iyo faahfaahin ku saabsan xaaladda noo xiiso leh. Sidaas darteed haddii aad leedahay qorshe aad ku iibsan karto telefoonka oo dhan ama noqoto qaybiye, tani waa meel lagu bilaabo.
Waxaan kugula talinaynaa in aad isticmaasho baaritaanka sare, faallooyinka iyo dalabyada, xiriirada ku yaal hoose ee bogga laakiin waqti ka dib waxaan filayaa in aan meel u dhigo meel u dhiganta wareegga wareegga maxaa yeelay waa kuwo aad u xiiso badan.
Post Previous«Previous Safarkii ugu dambeeyay ee sawirada 7
Post Next Geobide, Badalka iyo Isku duwidda System ED50 ETRS89Next »